၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်) ၏ လူထုပညာပေးရေး လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်တခုအဖြစ်
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)အမည်ဖြင့် ဘလော့ဂ်တခုကို ယနေ့ (၂-၉-၂ဝ၁ဝ) မှစ၍ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မှတ်သားဖွယ် အချက်အလက် ဗဟုသုတမျိုးစုံကို ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ အင်တာနက်မှတဆင့် ဖြန့်ချိပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
အောက်ပါ လင့်ခ်အတိုင်း သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဘလော့ဂ်၏ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံသူများအနေဖြင့်
1. ဘလော့ဂ်၏ လိုအပ်ချက်များကို အကြံပေးခြင်း၊
2. ကိုယ်တိုင်ရေး ဆောင်းပါးများ ပေးပို့ခြင်းနှင့်
3. သိမှတ်ဖွယ် ဗဟုသု အချက်အလက်များ ပေးပို့ခြင်း
တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ လက်ခံကြိုဆိုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။